Ungayiphepha njani i-asthma flare ebangelwa yintsholongwane - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Izilwanyana Zasekhaya Imfundo Yezempilo, Iindaba Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Cinezela Ulwazi Lweziyobisi Impilo Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Imidlalo Ukuphuma Inkampani Imfundo Yezempilo, Izilwanyana Zasekhaya Inkampani, Iindaba Imidlalo Enzima Imfundo Yezempilo Inkampani, Ukuphuma
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> Kufuneka wenze ntoni xa ukugula kusiba mandundu ngakumbi isifuba sakho sombefu
Kufuneka wenze ntoni xa ukugula kusiba mandundu ngakumbi isifuba sakho sombefu
Amaxesha amaninzi, iimpawu zakho zesifuba azikukhathazi… de ube uyagula. Emva koko, into elandelayo uyazi, uvuka ezinzulwini zobusuku ukhohlela kwaye uvuthela ungamisi. Ibizwa ngokuba yintsholongwane ebangelwa yintsholongwane, kwaye yenzeka xa imeko yakho inyanzeliswa sisifo sokuphefumla. Ngethamsanqa, lukhona unyango olusebenzayo, ngaphandle kokusebenzisa i-inhaler yakho ngeeyure ezimbalwa, oko kuyakwenza ukuba uphefumle ngokulula-kwaye ulale ubusuku bonke-kwakhona.
Ngaba intsholongwane ingayenza mandundu i-asthma?
Izifundo bonisa ukuba usulelo lwentsholongwane lubangela ukuba iimpawu zesifuba ziye zisiba mbi. Esinye sezona zinto zixhaphakileyo kuhlaselo lwesifo sombefu sisifo sentsholongwane egazini okanye intsholongwane, njengokubanda, umkhuhlane, inyumoniya, okanye usulelo lwesono. Xa ugula, iindlela zakho zomoya ziyavutha kwaye zinciphise- oko kwenza ukuba kube nzima ngakumbi ukungena emoyeni. Iintsholongwane zokuphefumla zihlala zibangela ukonyuka kweencindi, ezinokwenza nokuphefumla kube nzima.
Ukuphefumla kancinci luphawu lwe-COVID-19, kwaye kubantu abane-asthma kunokuba kubi ngakumbi. Abantu abanesifo sombefu basemngciphekweni ophezulu wokugula kakhulu ukuba bayayifumana inoveli yekoronavirus, ngokwe Amaziko oLawulo lweZifo noThintelo (CDC), ngenxa yezizathu ezifanayo ezinye izifo zokuphefumla zandisa iimpawu.
Zithini iimpawu zesifo se-asthma esibangelwe yintsholongwane?
Ukuqhambuka kwesifuba yi-bronchospasm kunye nokudumba kwemiphunga, utshilo uPierrette Mimi Poinsett, MD, ongumcebisi kwezonyango e Umama Uthanda Okona kulungileyo . Usulelo lokuphefumula kubandakanya neentsholongwane kunokubangela i-asthma flares. Iimpawu zesifo se-asthma esibangelwe yintsholongwane ziyafana neempawu zesifuba, kwaye zinokubandakanya:
Yimpawu elungileyo yokuba inxulumene nentsholongwane ukuba isifo sakho sombefu silawulwa kakuhle, kwaye le miqondiso ibonakala ecaleni kwesifo sentsholongwane.
Iimpawu zesifo sombefu zivela kwibala ukusuka kobumnene ukuya kobunzima. Uhlaselo olubi lwe-asthma lunokusongela ubomi, ngenxa yoko kubalulekile ukuqaphela iimpawu. Ukuba uvelisa iimpawu ezinjengokuphefumla nzima, ukubhabha kwamakhala, ubunzima bokuthetha okanye ukuhamba, kunye / okanye umbala omnyama kwimilebe, ulusu, okanye iinzipho, tsalela umnxeba ku-911 kwaye ufune uncedo lwezonyango kwangoko.
Yintoni eyenza i-asthma ibe nzima? Ukongeza kwisifo sentsholongwane egazini, ezinye eziqhelekileyo ezibangela Isifo se-asthma flare-up zezi:
Izitenxo ezisemoyeni zinjengomsi
Imozulu- amaqondo obushushu abandayo okanye ixesha lokungabikho komzimba
Amayeza afana ne-beta-blockers
Xa kuvela isifo se-asthma, kunokuthatha iintsuku okanye iiveki ezininzi ngaphambi kokuba iityhubhu zakho ze-bronchial zinganyanzeleki, kuxhomekeke ekubeni inzima kangakanani imeko.
Yintoni enceda i-asthma xa ugula?
Akukho lunyango ngokukodwa kwiimpawu zesifo se-asthma esibangelwa yintsholongwane, kodwa kukho inani lonyango olunokunciphisa ukukhwehlela, ukuqina kwesifuba kunye nokuvutha. Eyona ndlela yokulawula isifuba kukuthintela kunye nolawulo lwexesha elide olunqanda uhlaselo ngaphambi kokuba lwenzeke.
Okokuqala, phuhlisa isicwangciso sokusebenza se-asthma kunye nomboneleli wakho wezempilo ngaphambi kokuba ugule. Olu luxwebhu oluthe ngqo olusekwe kumanani akho xa uphefumlela kwimitha yokuhamba okuphezulu kunye neempawu. Kukho imimandla emithathu: eluhlaza, omthubi nobomvu.
Indawo eluhlaza linqanaba apho ungenazo iimpawu kwaye ukuhamba kwakho kuphezulu kuyeyona ndawo iphakamileyo (ukuhamba okuphezulu kuyajongwa ngaphezulu kweeveki ezimbini ukuya kwezintathu ukumisela eyona nto iphambili kuye). Ukuhamba okuphezulu kuyalinganiswa yonke imihla ukujonga indawo okuyo ngoku.
Umda otyheli iyaphawuleka ngokuncipha kokuhamba okuphezulu kunye nokuqala kweempawu.
Indawo ebomvu iyaphawuleka ngokuhla okuphezulu kokuhamba okuphezulu kunye neempawu ezinzima.ItIndawo yongxamiseko ebonisa isidingo sokunxibelelana nomboneleli wakho wezempilo okanye uye kukhathalelo olungxamisekileyo.
Umda ngamnye kufuneka ube namayeza ahambelana nawo acetyiswayo ukunceda ukulawula isifo sakho sombefu.Ukuhlala kummandla otyheli okanye obomvu luphawu lwe-asthma ebukhali, utshilo uGqirha Poinsett.
Zeziphi iintlobo zamayeza esifuba anceda xa ugula?
Amayeza esifuba ahlulahlulwe aba ziindidi ezimbini eziphambili: amayeza olawulo lwexesha elide kunye namayeza okunceda ngokukhawuleza, utshilo uGqirha Poinsett.
Amayeza olawulo lwexesha elide zikwabizwa ngokuba kukuchasana nokudumba, isilawuli, okanye amayeza olondolozo. La mayeza anciphisa ukudumba kwimiphunga kunye nemveliso yencindi. Amayeza olawulo lwexesha elide athathwa rhoqo-nangaphandle kweempawu-zesiphumo esifanelekileyo. Oku kunokubandakanya i-corticosteroids enganyangekiyo, amayeza omlomo, kunye nokudibanisa inhalers.
Amayeza okunceda ngokukhawuleza aziwa ngokuba ngamayeza okuhlangula kwaye asetyenziselwa ukunyanga iimpawu zesifo sombefu xa ukwindawo etyheli okanye ebomvu.
Isicwangciso sakho sokwenza xa ugula sinokudityaniswa kwezi zimbini. Umzekelo, umboneleli wakho wezempilo unokucebisa ukuba uqale usebenzise i-inhaler ye-steroid kwiimpawu zokuqala zesifo sentsholongwane ukukhusela i-flare.Amayeza afana albuterol phumla umsipha wemisipha kwaye ukhokelele ekungeneni komoya okungcono kwiindawo ezinzulu zemiphunga, utsho USumana Reddy , MD kwi-Acacia Family Medical Group ePrunedale, eCalifornia.Ama-inhalers okuhlangula amafutshane anje anokunceda xa isifuba sakho sombefu sisebenza xa ugula-kwaye unokufuna ukusisebenzisa rhoqo kunesiqhelo.
Umboneleli wakho wezempilo unokucebisa a I-nebulizer , Eliyeza elinikwa ngesigqumathelo ukunceda ufumane amayeza emiphungeni yakho ngelixa ugula. Unokufuna kwakhona i-steroid yomlomo efana ubume , Kuxhomekeke kubukhali beempawu zakho.
Ezinxulumene: Iziphumo ebezingalindelekanga zeAlbuterol
Ndingawunqanda okanye ndiwuthintele njani umbefu wam ukuba ungambi?
Ukulandela isiCwangciso sokuSebenza seMbefu yeyona ndlela ilungileyo yokujonga isifo sombefu, uGqirha Poinsett ucebisa.
Ukongeza, unokuthatha amanyathelo ukunqanda okubangela. Ukuba ukugula kwenza i-asthma flare yakho, enokubandakanya:
Ukuhlamba izandla rhoqo
Ukunxiba imaski xa ukufutshane nabantu abanokugula
Ukugcina umgama ubuncinci iinyawo ezi-6 ukusuka kubantu abagulayo
Ukufumana umkhuhlane rhoqo ngonyaka ukunqanda ukugula
Ukuqala amanyathelo ongezelelweyo kunyango lokuqala lokugula
Kuya kufuneka uxoxe nomboneleli wakho wezempilo ukuba isifo sakho sombefu siba sibi ngakumbi xa ugula kuba unokufuna uhlengahlengiso kunyango lwakho. Kubalulekile ukuba uthathe amayeza akho rhoqo njengoko kumiselwe ukuthintela ukuqhuma okungenzeki.
I-Focalin vs Adderall: Umahluko, ukufana, kwaye yeyiphi engcono kuwe
Owona myalelo uthandwayo ngoMatshi: Vitamin D
Lixesha elingakanani lokufukamela umkhuhlane?
Ngaba i-pepto bismol iyanceda ngeentlungu zesisu
ukunyanga njani usulelo lomchamo ekhaya
ukuphilisa njani usulelo lwesinyi ekhaya
zingaphi iiprobiotics zokuthatha ii-antibiotics